Madaxweynaha maamulka Puntland oo soo gaaray Muqdisho – Radio Muqdisho
Madaxweynaha maamulka Puntland oo soo gaaray Muqdisho
Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Dr .Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafti ballaadhan oo uu hoggaaminayey oo maanta 9-April-2016-ka kasoo amba baxay magaalada Garoowe ayaa waxaa siweyn loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho.
Wafdiga Madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen Wasiirro, Xidhibaano iyo saraakiil sare oo ka tirsan Madaxtooyada maamulka Puntland ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde kusoo dhoweeyey Ra’iisul-wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, Wasiirro iyo Xildhibaano ka tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland ayaa soo dhoweynta kaddib waxaa loo soo gudbiyey Qasriga Madaxtooyada Soomaliya halkaas oo uu warbaahinta kula hadlay ugana warbixiyey ujeedka socdaalkiisa.
C/weli Gaas ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta wanaagsan ee loo sameeyey, waxaana uu intaa sii raaciyey in ay halkaan u yimaadeen ka qayb galka shirka Madasha Wadatashiga qaran ee hoggaamiyayaasha National Leader Forum ee looga hadlayo doorashooyinka 2016-ka.
Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa shirka berrito ka furmi doona magaalada Muqdisho u rajeeyey in uu noqdo mid guul iyo horumar u horseeda ummadda soomaaliyeed ee ay daashadeen abaaraha iyo colaaduhu.
Maamulka K/Galbeed oo dowladda F. S. ku bogaadiyay heshiiska ay la gashay Puntland+Dhageyso
Madaxweynaha oo la filayo in uu saaka furo shir looga hadlayo doorashooyinka dalka